Lifestyle Archives - Cele Channel
June 29, 2019 Myo Min Htet	0 Comments
လက်ရှိအချိန်မှာ အသက် ၂၄ သာရှိသေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့အဖိုးအရွယ် အသက် ၅၅ နှစ်ပိုကြီးတဲ့အမျိုးသားကြီးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရလို့ သူမအနေနဲ့ အရင်ကထက်ပိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ သူမကပြောပါတယ်။ သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Alexis Tadlock ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် Arkansas
ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့ဖွင့်မည့် အောင်ဘာလေထီမှစပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာသိမ်းငွေထဲမှကျပ်သိန်း ၂၅၀၀ ထည့်ပေးမည်
လာမယ့်ဇူလိုင် ၁ ရက်မှာ ဖွင့်မယ့် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲက စပြီး ဘဏ္ဍာသိမ်းငွေတွေ ထဲက ကျပ်သိန်း ၂၅၀၀ စီ ဆုမဲတွေထဲထည့်ပေးသွားမယ်လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန တာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောပါတယ်။ထီပေါက်မဲတွေလာမထုတ်လို့ တနှစ်ပြည့်ရင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်သိမ်းယူနေပြီး အဲဒီငွေထဲကနေ ထီဆုမဲတွေ ပိုပြီးပေးသွားမှာ
လျှပ် စစ် ဓာတ် အားကို သုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ အသုံးမပြုခြင်း၊ မလိုအပ်ပဲ ပိုသုံးထားခြင်း စသည့်အချက်များက သင့်အိမ်ရဲ့ မီတာခကို ပုံမှန်ထက် ပိုမို ကျသင့်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မီတာခ ချွေတာနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်
“ကျောင်းစရိတ်နဲ့အိမ်စရိတ်လေးရအောင် ကျောင်းကအပြန် ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့ မောင်နှမ ၂ယောက်
မိဘပေးတဲ့မုန့်ဖိုးကိုယူပြီး ကျော့ကျော့လေး ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူတွေရှိသလို ကိုယ့်ကျောင်းစရိတ်အတွက် ကို ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုရုန်းကန်နေရတဲ့ သူတွေထဲကမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Puerto Princesa မြို့ မှာနေထိုင်တဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်
မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပါဝင်ပတ်သက်သူဟုယူဆရသူသုံးဦးအား အလုပ်မှယာယီရပ်ဆိုင်းထား
မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အဖြေမထွက်သေးခင် ကာလတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူဟု ယူဆရသူ သုံးဦးအား အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း Myanmar Imperial University (MIU) က ယနေ့ (ဇွန် ၂၅ ရက်)
Hockey memory about the proposed marriage from the court painted pink
Graham’s daughter, now painted pink friendly lovely behavior of young kids after ratings received full. Hockey painted pink in recent
Each tender love images shortly beforeawait before the court and worm game
Prince finished hand Win and an actress before game two episodes, I became successful small audience favorite systems. MRTV-4 series
Kyaw Htoo behemoths is deemed to have been written to the woman due toaFriend
The film giant has been written toaFriend woman coming out ofafive-year-old friends to come over and
Slytherin lost love purusha is so attenuated by liberal and shelter in this world is good fun I get from Chit Thu Wai
Chit Thu Wai was one of most successful artists 0. The new era, with two lovely happy small family owned